यहि फाल्गुन २३ गते पर्सि शनि र मंगलको महायोग: यी राशी हुनेहरुलाई हुन सक्छ खतरा ! - Enepali Online
मार्च ७ अर्थात् फाल्गुन २३ गते शनि र मंगल ग्रह एकै राशिमा जाने योग परेको छ। जसलाई महायोग पनि भन्ने गरिन्छ। यो महायोग २ मे २०१८ सम्म रहनेछ।
शनि र मंगल दुई महिनासम्म एउटै राशीमा रहने छन्। शनि ग्रहलाई पापी ग्रहको नामले पनि चिनिने गरिन्छ। त्यसैगरी मंगललाई आगोको कारक मान्ने गरिन्छ।
शनि पहिले देखिनै धनु राशिमा गोचर (रहनु) छ र ७ मार्चको साँझ ६ बजेर ३० मिनेट जाँदा मंगल ग्रह पनि उक्त ग्रहमा प्रवेश गर्नेछ। मंगल र शनिको युति (मिलन) ले आउने समयमा सबै राशीहरुमा प्रभाव पर्ने छ। यी दुई ग्रहको मिलनले कुन राशिलाई कस्तो खतरा या प्रभाव पर्नेछ।
मेष राशि- मेष राशिको स्वामी मंगल हो। जो तपाईसंगै रहेको छ। मेष राशिमा लग्न हुनेहरुको लागि शनि-मंगलको योग मिलान नवौँ स्थानमा हुनेछ। यो युतिको कारण तपाइले अचानक कुनै दुर्घटनाको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ। स्वस्थ्य खराब रहने छ। त्यसैगरी अनावश्यक खर्च पनि बढ्न सक्छ।
वृष राशि- यस राशिको लागि शनि र मंगलको युति अष्टम भावमा रहेको छ । यो राशि हुने व्यक्ति कुनै आरोप या छलकपटको सिकार बन्न सक्नेछन्। मान सम्मानमा ठेस पुग्नेछ भने परिवारमा धनसम्पतिको विषयमा विवाद हुन सक्छ।
मिथुन राशि- मिथुन राशि हुनेहरुका लागि यो युति सप्तम स्थानमा रहेको छ। यस युतिले पटक-पटक कुनै काममा असफलता हुने समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ। थुप्रै कमाईका बाटो खुल्ने छन्। व्यापारी, नोकरी या पेशामा लागेका व्यक्तिलाई मंगल र शनिको युतिले थुप्रै अवसर मिल्ने योग छ। पति-पत्नी प्रेम प्रगाड हुनेछ।
कर्कट राशि- यस राशि हुनेहरुका लागि शनि-मंगल एक साथ हुनुले अशुभ फल प्रदान गर्दछ । किनकी यो छैठौं भावमा रहेको छ। यसले विनास र दुश्मनी बढाईदिन्छ। यो संयोगले नोक्सानीको संकेत गर्छ। हरेक काम गर्दा निकै दौडधुप गर्नु पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्नेछ।
सिंह राशि- सिंह राशिका लागि शनि र मंगलले पाँचौं स्थानमा गोचर गर्नेछ । यो स्थान सन्तान र शिक्षासँग जोडिएको हुन्छ। जसले गर्दा यी राशिका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिन समस्या हुन सक्छ। पढाईमा मन नलाग्ने योग छ। साथै आर्थिक मामला पनि ठूलो नोक्सानी हुने योग छ। सन्तान टाढा हुन सक्छन्।
कन्या राशि- कन्या राशिको लागि शनि र मंगलको स्थान चतुर्थ भाव रहनेछ । यस कारण यो आगामी दूई महिना चरम आर्थिक समस्याबाट बित्नु पर्ने देखिन्छ। पैसाको समस्याले बन्न लागेको महत्वपूर्ण काम पनि रोकिने छ। स्वस्थ्यमा समेत समस्या हुने योग छ।
तुला राशि- शनि-मंगलको योग तुला राशि हुनेका लागि सामान्य असर पर्न सक्छ। कुनै ठाउँबाट अचानक धनको प्राप्ती हुन सक्छ। लडाई, झगडा हुने सम्भावना छ। महिनौसम्म मानशिक तनाव हुन सक्छ। तर यो योगले तपाईलाई पैसाको भने कुनै कमि हुने छैन।
वृश्चिक राशि-वृश्चिक राशि मंगलकै राशि हो। शनि र मंगल आफ्नो राशिमा दोस्रो भावमा आउनुले शुभ संकेत गर्छ। मंगल योगले यो राशिको जातलाई निकै फाईदा दिने गर्छ। यसले धन या कुनै सम्पतिको रुपमा फाइदा दिने गर्छ। तर यो योगले सत्रू भने बढ्ने छन्। जसका कारण मन र प्रतिष्ठामा आँच आउने छ।
धनु राशि- शनि र मंगलको महायोग यस राशिमा नै हुन गैरहेको छ। त्यसकारण यसको असर सबैभन्दा बढी यहि राशिलाई हुनेछ। धनु राशिको स्वामी गुरु हो । जसले यस राशिलाई कैयौ प्रकारका समस्या पैदा गरिदिन्छ। समस्या खासमा आर्थिक र मान सम्मानको नै रहनेछ। व्यापारी र जागिर गर्ने व्यक्तिलाई हानी र तनावको सामना गर्नु पर्नेछ।
कुम्भ राशि- कुम्भ राशिको मानिसका लागि शनि-मंगलको गोचर शुभ रहनेछ। किनभने यो प्रदम स्थान भावमा रहेको छ। जसको कारण अचानक तपाईलाई ठूलो नाफा प्राप्त हुन सक्छ । सम्पतिको कुनै राम्रो सम्झौता पनि हुने योग छ। मान-सम्मानमा वृद्धि र परिवारमा माया प्रेम बढ्नेछ ।
मीन राशि- यस राशि हुनेका लागि शनि र मंगलको युति दशौं भाव रहनेछ । जसको कारण २ मेसम्म यस राशी हुनेहरुको लागि यो योगत्यति राम्रो मानिने छैन। अचानक कुनै समस्या आउन सक्छ। कुनै ठूलो दुर्घटना पनि घट्न सक्छ । सावधानी अपनाउनु होला। मानसिक तनाव हुने योग छ ।
Previous Post Previous post: तपाइँको फेसबुक अकाउन्ट अरुले त खोलिरहेको छैन ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
Next Post Next post: माग्ने बुढाको छोराको ब्रतबन्धमा हिन्दी गीत रोक, पार्टीमा पुगे प्रचण्ड,लालबाबु, नेपाल आर्मीको चिफ देखि गगन र भुवन, कोमलसम्म – देश कै ठुला नेता र कलाकारहरु उपस्थित भए पछी भाबुक हुदै माग्ने बुढाले यसो भने (भिडियो हेर्नुहोस)